အလုပ်ခွင်မှာ equality နှင့် diversity ဘယ်လိုကိုယ်တွယ်ကြမလဲ? | Mycanvas
အလုပ်ခွင်မှာ equality နှင့် diversity ဘယ်လိုကိုယ်တွယ်ကြမလဲ?
ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် Equality(တန်းတူညီမျှမှု)ဆိုတာ လူအားလုံးကို တူညီစွာဆက်ဆံပြီး အသက်၊ ကျား၊ မ၊ လူမျိုး၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှုတို့ မခွဲခြားဘဲ တူညီသောအခွင့်အရေးများကို ရရှိစေရေးဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမား အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးများ ရရှိရေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Diversity(မတူကွဲပြားမှု)ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဥ်ကြုံတွေ့နေရသည့်အရာဖြစ်ပြီး အခြားသူများနှင့် မိမိ တွင်ရှိသောကွာခြားချက်များအားလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ အမူအကျင့်စသော အရာများအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ မတူညီကွဲပြားမှုသည် လူတစ်ဦးစီက သူတို့နှင့်အတူ ယူဆောင်လာပေးသည့် မတူညီသော ရှုထောင့်များရှိကြပြီး ထိုအရာများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင် Equality နှင့် Diversityကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မလဲ?
မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိသော်လည်း ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာ ထိုစိန်ခေါ်မှုများထက် များစွာသာလွန်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် မတူညီသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးနောက်ခံများမှ အလုပ်ခန့်သောအခါတွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွေးခေါ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းသစ်များကို ပေါ်ပေါက်လာစေပါတယ်။
မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုသည် သင့်အား ကျယ်ပြန့်သော ရှုထောင့်များ၊ အတွေးအမြင်များနှင့် ဘာသာစကားများကို ရရှိစေပြီး သင့်ဖောက်သည်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကွဲပြားမှုများကို ဂုဏ်ပြုပြီး လူအားလုံး၏ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေရန် အားပေးခြင်းဖြင့် သင်မစဉ်းစားနိုင်သော အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
သာတူညီမျှနှင့် ကွဲပြားမှုတွေရှိသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ?
အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ ထောက်ပံမှုသည် သင့်လုပ်သားအင်အားကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော်လည်း သင်၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာများသည် အဆိုပါမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို တက်ကြွစွာကျင့်သုံးခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့သည် ထိရောက်မှုမရှိတော့ပေ။
လစ်လပ်နေရာတိုင်းသည် သင့်လုပ်သားအင်အားကို အားကောင်းစေမည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အတွက် အကောင်းဆုံးလူကို အသုံးချချင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးလူကို ဘယ်လိုရှာမလဲ?
သင်၏ စုဆောင်းရေး ဗျူဟာများကို ဂရုတစိုက် စဉ်းစားပါ။ သင်သည် အချို့သော ‘လူအမျိုးအစား’ ကသာ မြင်သည့်နေရာများတွင် လစ်လပ်နေရာများကို ကြော်ငြာနေပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ရည်မှန်းချက်မှာ အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုအလုပ်ခန့်ရန်ဖြစ်ပါက အမျိုးသားများ အဓိကမြင်ရသည့်နေရာများတွင် ကြော်ငြာခြင်းမပြုသင့်ပါ။
လူများသာအင်တာဗျူးပုံစံသည် သင့်လုပ်ငန်း၏ ကွဲပြားသောသဘောသဘာဝကို ထင်ဟပ်စေသင့်သည်။ အင်တာဗျူးအဖွဲ့တွင် မတူညီသောအဖွဲ့များကကိုယ်စားပြုပါက၊ သင်သည် အလားအလာရှိသောဝန်ထမ်းများအားလုံးကို တူညီသောအောင်မြင်မှုအခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်နေပါတယ် ၎င်းသည် လျှောက်ထားသူအားလုံးအတွက် ညီမျှသောအဆင့်သတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးပါတယ်။
အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်း သင့်အဖွဲ့သည် မေးမြန်းနိုင်သည့် မေးခွန်းများကို သိရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ လစ်လပ်နေသောရာထူးနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် သဘောတူညီထားသော မေးခွန်းများ ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့မေးခွန်းတွေကို ခွင့်မပြုဘဲ ဘယ်တော့မှ မမေးသင့်ပါဘူး။ အင်တာဗျူးတွင်မေးမြန်းရမည့် မေးခွန်းအားလုံးကိုလဲ ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲ လျှောက်ထားသူအားလုံးမေးမြန်းရန် ညွှန်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
(Zero Tolerance) ယနေ့ခေတ်လုပ်ငန်းခွင်တွင် အနိုင်ကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်းအတွက် နေရာမရှိပါ။ ထိရောက်သော တိုင်ကြားချက် သို့မဟုတ် မကျေနပ်ချက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ဖော်ဆောင်ပါ။ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် စိုးရိမ်စရာပြဿနာများကို လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့် မည်သို့တင်ပြရမည်ကို သိရှိကြောင်း သေချာစေပါစေ။။ ကိစ္စရပ်တိုင်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ညီတူညီမျှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ Sensitivity Training သည် ဝန်ထမ်းများအား ကျယ်ပြန့်သော အမြင်များနှင့် အတွေးအခေါ်များကို တန်ဖိုးထားတတ်စေရန်နှင့် တစ်စုံတစ်ဦးအား မရည်ရွယ်ဘဲ စော်ကားရန် မည်ကဲ့သို့ လွယ်ကူကြောင်း ဝန်ထမ်းများအား ကူညီပေးပါတယ်။
ဤသင်တန်းအမျိုးအစားသည် သင့်ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲ၍မရသော ပြဿနာများမဖြစ်မီ ဖြစ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကျွမ်းကျင်မှုများစွာကို ပေးပါလိမ့်မည်။